EX - ABSDF: August 2014
Sa Maung Published on: August 29, 2014 မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိပစ္စုပ္ပန် ပကတိအခြေအနေများကို လေ့လာကြည့်သောအခါ
နမ္မတူမြို့ နယ်၊ မန်စံကျေးရွာ SNLD ရုံးဖွင့်လှစ် ရခိုင်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီး(၅)ဦး ရာထူးအပြောင်အလဲ နောက်ကွယ်မှ အကြောင်းအရာများ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြား
Min Din (တစ်)
အညာက ဘုရားပွဲနဲ့ ရွေ့ပြောင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ လူငယ်တွေအကြောင်း (အသံဖိုင်) ရှေးဟောင်း ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် ခိုးယူသူများအား စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူထား
Tay Za August 28, 2014 at 11:29am သူ့နာမည်က
ကိုကျော်လင်း၊ အသက်က ၄၅ နှစ်ခန့်၊ မိသားစု ၅ ယောက်၏ အိမ်ထောင်ဦးစီး၊ နေရပ်က ပဲခူးရိုးမပေါ်ရှိ ပဒဲကျေးရွာ ဖြစ်သည်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိ၍ အိမ်ခြေ ၆၀ ကျော်ရှိကာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အင်မတန်ခက်ခဲသည်။ ယခင်က ဖွတ်များတွေ့ရလေ့ ရှိသောကြောင့် “ဖွတ်ကြော” ဟုခေါ်သည်။
မနေ့က ငါးရံ.ခြောက် ထုတ်ပြီးရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်နဲ့
ဖေ့ဘုတ် မှာ စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ ငါးရံ့ခြောက်မှာလဲ ပိုးသတ်ဆေး တမျိုးဖြစ်တဲ့ ၉၀% ယင်ဆေးခဲ (သူတို့အခေါ်၉၀%ယင်မနားဆေး) ကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်
သုံးနေကြပြီတဲ့။ စားသောက်ကုန်တွေကို စစ်ဆေးတဲ့ FDA အဖွဲ့က ဒါတွေကိုမသိဘူးလား။
မဟာရန်ကုန် မြို့ ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်း (YUTRA)အတွက် ဂျပန် JICA က စီမံကိန်း အကြိုလေ့လာသုံးသပ်ချက်လုပ်ပြီး အချက်ကြီးကိုးခုကိုပြင်ဆင်ဖို့
လိုအပ်တယ်လို့ အကြံပြုထားပါတယ်..။ မီးပွိုင့်တွေ စနစ်တကျမရှိတာ၊ လမ်းပေါ် ဈေးရောင်းတာ၊ ကားတွေစည်းကမ်းမလိုက်နာတွေ..ပေါ့..။ အချက်အားလုံးဟာ အမှန်တွေချည်းပဲဆိုတော့ သိပ်တော့ ပြောစရာမရှိပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်တွေက ချို့ ယွင်းပျက်စီးနေတာတွေ စည်းကမ်းမရှိတာတွေ အဲဒီလို အပေါ်ယံတွေပဲ သိပြီး အဲဒါတွေဘာလို့ဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာကိုသေချာမသိဘူးလို့ထင်ပါတယ်..။ Read more »
ပညာရေးဥပဒေကြမ်းဖျက်သိမ်းဖို့တက္ကသိုလ်ကျာင်းသားများ ဆန္ဒပြ (ရုပ်/သံ) တရုတ်ဇနီးအဖြစ် လူကုန်ကူးခံရသူ ကလေးမိခင်ကို ပြန်ခေါ်ဖို့ မိသားစု လိုလား (ရုပ်/သံ) ၀မ်းတွင်းမြို့နယ် လူခင်းကျေးရွာအုပ်စု ပျားစွဲကျေးရွာမှာ အစာအဆိပ်သင့်
သုတေသနအသစ်များက ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများသည်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည်ဟု ဆိုကြသည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ငါးဆယ်က
ကုလသမဂ္ဂ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးညီလာခံ၌ ချမ်းသာသည့် နိုင်ငံများအနေဖြင့်ဆင်း ရဲသည့်နိုင်ငံများကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး၊ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုရရှိရေးအတွက်အကူအညီမည်မျှပေးသင့်သည်ကို ဆွေးနွေးကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ကုလသမဂ္ဂက ချမ်းသာသည့်နိုင်ငံများ၏တိုင်းပြည်ဝင်ငွေမှ (၀.၇)ရာခိုင်နှုန်းကို ပေးသင့် သည်ဟုဆိုခဲ့ပြီး ထိုအချက်ကို နောင်မဆုံးနိုင်သည့်နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးများ၌ဆက်လက်ထပ်လောင်း အတည်ပြုခဲ့ကြ သည်။ သို့သော်လည်း ထိုရည်မှန်းချက်ကို နိုင်ငံအချို့ကသာဖြည့်ပြည့်မီခဲ့ကြသည်။
Daung Ni by Lu Bo
ရွှေဘို-မန္တလေးကာလမ်းမှာ ယာဉ်တိမ်းမှောက်သဖြင့် ၂ ဦးသေ၊ ၁၆ ဦးဒဏ်ရာရ
ရန်ကုန်တွင် အိမ်ခန်းငှားခ မြင့်နေမှု ဖြေရှင်းပေးရန် အဆိုတင်
ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများအတွက် နယ်စပ်မြို့ သုံးမြို့တွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးမည်
အင်အားကြီး စစ်ရေး မဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့ ကာချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံ
DVB ရေဒီယိုအသံလွှင့် အစီအစဉ်ရပ်နားတော့မည်
တစ်ဘက်ယာဉ်ကြောသို့ရောက်ရှိပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်မောင်းနှင် လာသော ယာဉ်နှင့်တိုက်မိသဖြင့် (၃)ဦးသေဆုံး
စစ်တပ်က ငြိမ်းချမ်းရေးကို မဖြစ်မနေ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားဟု သမ္မတ ပြော
Miss Myanmar World 2014 ဆန်ကာတင် အလှမယ် ၂၀ ရွေး (ရုပ်/သံ)
ဆီးရီးယားက အဓိက လေဆိပ်တခုကို IS သူပုန်တွေ သိမ်းပိုက်
အစ္စလမ်မစ်နိုင်ငံအဖွဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဖေါက်ဖျက်မှု ကုလ ရှုတ်ချ
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု လုံးဝမရှိတဲ့ ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်း
စည်သူအောင်မြင့်| August 25, 2014 | Hits:764
များပြားလာတာ၊ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ပမာဏ ကြီးမား လာတာ၊ မြေနေရာ ရှားလို့ မြေဈေးတွေ ခေါင်ခိုက် လာတာတွေကြောင့် ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်း တကယ်ပဲ လိုအပ်ပါတယ် (ပုံစာ – သော်ဟိန်းထက် / ဧရာဝတီ)
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ အံ့သြစရာ သတင်းတစ်ခုကြားကြရပါတယ်။ Read more »
Myo Tha Htet August 18, 2014 at 8:53pm
သီချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုဖူးတယ်၊ တကယ်တော့ သူက သီချင်းတွေ အများကြီး ဆိုခဲ့တာပါ။ သူ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ နာမည်က ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံတဲ့။ ကျွန်တော်တို့လည်း ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ် DVB ဒီဘိတ် (သြဂုတ် ၁၆၊ ၂၀၁၄) မှာ ``နေပျော်စရာ မြို့ပြ``
ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒီဘိတ်တစ်ခု ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ ပညာရှင်တွေ ဦးဆောင် ပါဝင်လို့ ဆွေးနွေးကြတဲ့ပွဲမို့ သိစရာ မှတ်စရာတွေ များခဲ့ပါတယ်။
ဆွေးနွေးသူတွေကတော့ မြို့ပြစီမံကိန်းပညာရှင်နဲ့ မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာကျော်လတ်၊ မြို့ရွာနဲ့ အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနက အိမ်ရာစီမံကိန်းဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး (အငြိမ်းစား) စာရေးဆရာ ဆရာ မြင့်မိုရ်ဆွေ၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ တနင်္သာရီတိုင်း တာဝန်ခံ၊ အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီး (အငြိမ်းစား) ဦးသက်ထွန်းဝင်းနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့ရွာနဲ့ အိုးအိမ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်မီမီတင်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
တရားမဝင် မြန်မာအလုပ်သမား အယောက် ၄၀ ခန့် မြန်မာထံ တရုတ်အပ်နှံ
တောမီးမှတစ်ဆင့် တောင်ယာတဲသို့ကူးစက်လောင်ကျွမ်း၍ ကလေးငယ်(၂)ဦးသေဆုံး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စာပေ အနုပညာရှင်များ တွေ့ဆုံ ပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အဖွင့် အမှာစကား (အသံဖိုင်)
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းတူးဖော်မှုဟာ အာရုံလွှဲပြောင်းဖုို့ ဖြစ်နုိုင် (ရုပ်/သံ)
ငွေကြေးခဝါချမှုစိစစ်ရာတွင် စက်မှုဇုန်မြေ ပိုင်ဆိုင်မှု ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်လာ
ကွန်ပျူတာUPSမှ အပူလွန်ကဲ၍ မီးလောင်မှုဖြစ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စာပေအနုပညာရှင်များ တွေ့ဆုံ
Myo Tha Htet August 24, 2014 at 10:49pm
(သြဂုတ် ၂၃၊ ၂၀၁၄) မှာတော့ ``ရခိုင်ပြည်က အကူအညီ`` ဒီဘိတ်ကို ကိုသန်းဝင်းထွဋ်က တင်ဆက်ပါတယ်။ ပထမဆုံး အခက်အခဲတစ်ခုကတော့ အကဲဆတ်တဲ့ အကြောင်းအရာ ဖြစ်တာမို့ ဦးဆောင် ဆွေးနွေးဖို့နဲ့ ပါဝင် ဆွေးနွေးဖို့ကို ဖိတ်ကြားရာမှာ အစိုးရ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတကာက အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့တွေက လက်ရှောင်ကြပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ မတက်ရောက်ကြတာမို့ အသံစုံကြားဖို့ အခွင့်အရေးမှာတော့ အားနည်းခဲ့ရပါတယ်။
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေအဖြစ် ရခိုင်အမျိုးသမီးကွန်ရက်ရဲ့ ပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ညိုအေး၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မင်း၊ ရခိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် သိက္ခာတော်ရ ဆရာတော် ဦးကျော်ညွန့်နဲ့ ဘ၀မွန်မြတ် ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးဟန်ဇာမောင်တို့က ပါဝင် ဆွေးနွေးပါတယ်။
Min Din's photo.
ကျောက်ဆည် မင်းဘာမှ ထပ်မလုပ်နဲ့.. သန်းရွှေကို မွေးထုတ်ပြီးကတည်းက မင်းတာဝန်ကျေပြီ။ သူလိုလူ နောက်ထပ်မမွေးဖို့ သမိုင်းကို ကတိပေးလိုက်။
ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် အလှကုန်ပစ္စည်း ကိုးမျိုးတွင် အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်သည့် ဓာတုဆေးဝါးများ ပါဝင်၍ သုံးစွဲရန် မသင့်ကြောင်း သတိပေးချက်
မိမိယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံများကို တန်ဖိုးထားပြီး မြတ်မြတ်နိုးနိုး ထိန်းသိမ်းလိုကြသည်။ မိမိလူမျိုးတို့ကျင့်သုံးနေသော ဓလေ့ထုံးစံများ ပျောက်ကွယ်သွားမည်ကို စိုးရိမ်ကြသည်။ မိမိတို့ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ ပျောက်ပျယ်သွားမည်ကို စိုးရိမ်တတ်ကြပြီး အခြားဘာသာများကို အထင်အမြင်သေးတတ်ကြသည်။ မြန်မာလူမျိုးတို့သည်လည်း ထိုနည်းတူစွာ မိမိတို့အမျိုးဘာသာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံများ ပျောက်ကွယ် သွားမည်ကို မလိုလားကြပေ။ သို့ရာတွင် လူအများ သတိမမူမိသော အကြောင်းအရာမှာ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ ထုံးစံများသည် ပြောင်းလဲနေသည်ဆိုသည့် အချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်များသည်လည်း ပြောင်းလဲနေသဖြင့့်် ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနောက် ပထမသံဃာရတနာတင်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးဦးနုအစိုးရလက်ထက် ဆဋ္ဌသံဃာရတနာတင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်၍ ဝိဝါဒကွဲပြားမှုများကို ညှိခဲ့ရသည်။ Read more »
အမျိုးသညာ အဆွေကလည်း သတိုးမဟာ ရွှေ မဟုတ် ကိုးစရာ ဆရာတွေကလည်း နသိုးရွာ ဗိုလ် လုပ် တဲ့ ဂျိုကုပ်လောက်မှ မဖြစ်တော့….
အသေအရင်ခံရမယ့် ခြေလျင်ခြေမြန်ဘ၀နဲ့ ကျိုးကျိုးကုပ်ကုပ် အရိုးထုတ်ခဲ့ရ….
အပြောနဲ အ၀င်နဲ အတင်နဲ နဲ(၃)နဲ ကြောင့် ရဲ(၃)ရဲ လည်း မကူနိင် မွဲ (၃)မွဲ နဲ့ အပူလှိုင်…
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမ လေးလပတ် အစည်းအဝေး တတိယနေ့ ကျင်းပ
ရုရှား ယာဉ်တန်း ဝင်ရောက်လာ၊ ကျူးကျော်မှုလို့ ဆို
အန်အယ်လ်ဒီက မဘသကို တရားစွဲမှု စစစ်တော့မည်
ဘုန်းကြီးကျောင်း ခေါင်မိုးပေါ်မှ လူတစ်ဦး ပြုတ်ကျသေဆုံး
လူလေးဦးသေ၊ သုံးဦးဒဏ်ရာ ရစေသည့် မန်းယာဉ်တိုက်မှု ယာဉ်မောင်း မူးယစ်ဆေး သုံးထားခြင်း ရှိမရှိစစ်ဆေး
စိတ်ကြွမူးယစ်ဆေးဝါး ကျပ် ၁၇ ဘီလီယံဖိုးခန့် ရေတပ်က ဖမ်းမိ
အီဘိုလာသံသယရှိသူ အခြေအနေကောင်းပါတယ် – ဒေါက်တာ တိုးသီရိအောင်
အီဘိုလာဟု ယူဆရသော ဦးဇင်မင်းဦး ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကောင်းမွန် လျက်ရှိ
ကျိုက်ထိုမြို့နယ် ကျိုက်ပိကျေးရွာ၌ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးအမှန် တကယ်ရှိမရှိ လာမည့် ၂၆ရက်တွင် အတည်ပြုနိုင်မည်
ပုတ်သင်ညိုကဲ့သို့ တနေရာမှ တနေရာကူးပြောင်းသည့်အခါ မူလ ရပ်တည်ချက်၊ ယုံကြည်ချက်တို့ကို စွန့်လွှတ်ခါ အရောင်ပြောင်းလဲသွားသူများလည်းရှိသည်မှာ ဓမ္မတာပင် ဖြစ်သည်။ စဉ်စစ် ထိုသူများသည် ယုံကြည်ချက်ကြောင့်သာ ပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ ယုံကြည်သည်မှာ မိမိကောင်းစားရေးအတွက် ဘာမဆို လုပ်မည်ဆိုသည့် ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ တနည်းဆိုရလျှင် မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် အရာရာကို အသုံးချမည်ဟု ခံယူချက်ရှိသူများပင် ဖြစ်တော့သည်။
အမေရိကန်... ဖလော်ရီဒါကမ်းခြေမှာ... လူတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်နေတယ်။
သူဟာ မမျှော်လင့်ပဲ ရှေးဟောင်းမီးခွက်တစ်လုံးကို တွေ့လိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပေ့ါ... မီးခွက်ကို ပွတ်ကြည့်လိုက်တာ မီးခွက်စောင့် ဘီလူးထွက်လာပြီး သူ့ကို ဆုသုံးခု တောင်းခွင့်ပြုတယ်။
ဒါနဲ့ သူက.... ပထမဆုအနေနဲ့... "ရဲတိုက်လောက်ရှိတဲ့ အိမ်ကြီးလိုချင်တယ်" လို့ တောင်းတယ်။
တစ်ရက်ထဲမှာ သိန်းတစ်သောင်းကျော်ဖိုး ဈေးဝယ်တဲ့ သမီးတော်တွေ မန္တလေးနန်းမြို့တည် မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးကို စိတ်အဆိုးဆုံးလူတွေပြပါဆိုရင် မန္တလေးနန်းမြို့ထဲက အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာချုပ်တိုင်းမှူးနဲ့
အရာရှိတွေကို ပြရပါလိမ့်မယ်၊ မန္တလေးမြို့ကို မြို့တည်ခဲ့တဲ့အတွက် သမီးတော်တွေ ပြင်ဦးလွင်တက်တိုင်း မန္တလေးဟာ ခရီးတစ်ခေါက်နားရာ ဈေးဝယ်ရာမြို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒီတပတ်လည်း သမီးတော်တွေ ဆုံညီကြွမြန်းလို့ လာပြန်ပါပြီ။
အစ္စရေး တိုက်ခိုက်မှု ဟားမတ်စ် တပ်မှူး ၃ ဦး သေ
အိန္ဒိယ မိန်းမငယ် ၂ဦး အမှု ဆေးစစ်ချက် ကွဲလွဲနေ
ရန်ကုန်မြို့လယ် မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံ အနီး၌ ညဈေးတန်း တစ်ခုဖွင့် လှစ်ရန် စီစဉ်နေ
အကောင်းဆုံးကြိုးစား ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဟု အလှမယ် ခင်ဝေဖြိုးဟန် ပြော
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ အဂတိလိုက်စားမှု ရှိနေဆဲဟု သမ္မတ ၀န်ခံ
ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် စကားများပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား ပြောမရသဖြင့် ကြိုးဆွဲချ သေဆုံး
ကော့ကရိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ကျားမအင်္ဂါမပါသော ကလေးငယ်တစ်ဦးမွေးဖွား
အော်ရီဒူး အင်တာနက် Package Plan အသစ်ကြေညာ
ဘရူနိုင်းဘုရင့်ဖလား ဗိုလ်လုပွဲ မြန်မာနှင့်ဗီယက်နမ် ယှဉ်ပြိုင်မည်
ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းပေါ်တွင် သံလွင်ခရီးသည်တင်ယာဉ် တိမ်းမှောက်
လမ်းပြောင်းပြန် မောင်းနှင်လို့ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ် ခရီးသည်တင်ယာဉ်မှ စက်ဘီးကိုနောက်မှ တိုက်မိသဖြင့် (၁)ဦးသေ၊ (၁)ဦးဒဏ်ရာရ
မိုင်တိုင်အမှတ် (၂၂၁/၁-၂၂၁/၂)ကြား JJ Express ယာဉ်တိမ်းမှောက်ခြင်း (ဓါတ်ပုံ)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အာဟာရဖြည့်ဆည်းမှု အခြေအနေ ပြန်ဆန်းစစ်ရန်လိုဟု ပညာရှင်ပြော
” …ဒီနေရာကြုံတုန်း ပြောပါဦးမယ်။ နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ “ ဆို၊ က၊ ရေး၊ တီး ” ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဇာတ်တော်ကြီးတွေပါတော့ အဲဒီဇာတ်တော်ကြီးတွေကို တီဗွီကပြန်လွှင့်တဲ့အခါ ဇာတ်ပို့ဆိုင်းရဲ့တီးလုံးကို ဖြတ်တောက်ပစ် လိုက်တာက အဆိုးဆုံးပါပဲ။ သမားစဉ်အရအသံကုန်အထိ “တျာတျေတျော” သပ်ကာတီးမှ ပြည့်စုံ တာကို အလွယ်တကူဖြတ်ပစ်လိုက်တာဟာ “သဘင်မှုအနုပညာ” ကိုစော်ကားခြင်းတမျိုးပါပဲ။ ဘယ် သူမှလည်း ဒါကိုမလုပ်ရဘူး၊ .”
မြန်မာ့ဇာတ်သဘင်မှာ နောက်ပိုင်းဇာတ်တော်ကြီးတွေက အခရာ ကျလှပါသတဲ့။
“ အဆို၊ ပြော၊ အငို” တွေက ပညာသားတွေ ဖြစ်တယ်လို့ လည်း ဆိုတယ်။ ပါဠိ၊ ပါဋ်သားအပါအ၀င် ရှေးစာ၊ လင်္ကာတွေနဲ့တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ အဆိုတွေ၊ အပြောတွေဟာ ပရိသတ်ကို စွဲဆောင်နိုင်ပြီး
ဇာတ်ခုံကြီးတခုလုံး တောကြီးမြိုင်ကြီး ဖြစ်သွား သလို၊ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာကြီးလည်း ဖြစ် သွားနိုင်တာပါပဲ။ အလားတူပါပဲ ပြာသာဒ်အဆောင်ဆောင် ဖြစ်နိုင်သလို ၀ါးတလုံး ကြမ်းတခင်းနဲ့ တဲလေးတတဲလည်း ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။
ဟင်္သာတမြို့တွင် ဆိုင်ကယ်တိုက်မိသောကြောင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦး သေဆုံး
မော်ကျွန်းမြို့ ဘုရားကြီးကုန်းကျေးရွာမှ သုံးမြွှာပူးညီအမများ ကျန်းကျန်းမာမာရှိ
အီဘိုလာ သံသယရှိသူတဦး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးတွေ့ရှိ
မြန်မာက မလေးရှားအသင်းကို ၃-၀ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိပြီး ဗိုလ်လုပွဲတက်
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် ကူးစက်မြန် အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ သံသယရှိ လူနာတစ်ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိ
အာဖရိကအနောက်နိုင်ငံမှ ပြန်လာသူတစ်ဦးတွင် အဖျားရောဂါတွေ့ရှိ
နေ့စဉ်နှင့် အမျှ ယာဉ်တိုက်မှု နှင့် ယာဉ် မတော်တဆ မှုများ ရန်ကုန်မြို့ အနှံအပြားတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
နာမည်ကောင်းရ ထိုင်းရဲအရာရှိ မူးယစ်ဆေးမှောင်ခိုမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးခံရ အမေရိကန်သတင်းထောက် ခေါင်းဖြတ်ခံရတဲ့ဗွီဒီယို စစ်မှန်မှု အမေရိကန်စုံစမ်း
နိုင်ငံရေးဟူသည် မလွတ်လပ်မှုအကြောင်းခြင်းရာဟုဆိုခဲ့ပြီ။ ထို့ အတူ နိုင်ငံရေးဒဿနိကဗေဒ ဟူသည် မလွတ်လပ်မှုကို
ဖန်တီးသည့် အင်စတီးကျူးရှင်းများ အဖွဲ့ အစည်းများ၏ သဘောသဘာဝနဲ့ ၎င်းတို့ ၏ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တို့ အား သင့်မြတ်ခြင်းရှိမရှိလေ့လာဆန်းစစ်သည့် ပညာရပ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့ပြီ။ ဤကဲ့သို့ လူသား၏ သဘာဝမွေးရာပါလွတ်လပ်ခွင့်အား ထိန်းချုပ်၍ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းအတွက် လိုရာပုံဖေါ်ကြသည့် အင်စတီးကျူးရှင်းများအဖွဲ့ အစည်းများကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်သည့် နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ် ၀ါဒမျိုးစုံသည်လည်း ယနေ့ ခေတ်ထိ အမျိုးအစားစုံလင်စွာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေပြီ။ ဤသို့ ဝါဒမျိုးစုံထဲတွင် လူသား၏လုံးဝလွတ်လပ်ခွင့်အား တောင်းဆိုသည့် ၀ါဒမှာ
“အုပ်စိုးသူမဲ့ဝါဒ” (Anarchism) ပင်ဖြစ်သည်။ ဤ ၀ါဒသည် ပြည်သူလူထု၏ လွတ်လပ်ခွင့်အား လုံးဝ ထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်သည့် အာဏာရှင်စံနစ် (Authoritarianism) ၏ တိုက်ရိုက်ဆန့် ကျင်ဘက် အခြားအစွန်းတစ်ဖက်တွင်ရှိသော ၀ါဒဖြစ်သည်ဟုဆိုက မှားမည်မထင်။ Read more »
အမေရိကန်တွေက မြန်မာဒုက္ခသည်တွေလောက် ဥာဏ်မပြေးပါဘူး။ ဒီ အချက်ကို ခဏခဏ ပြောသူက ကျွန်တော်တို့မြို့က ဒုက္ခသည် လူငယ်တယောက်။ သူက ညနေဆို၊ အလုပ်ပြီးတာ
နဲ့ မျက်မှန်အမဲတပ်ပြီး ကမ်းခြေကိုပြေးတော့တယ်။ ကမ်းခြေတလျှောက် ရေကူးဝတ်စုံလေးတွေ ဝတ်ပြီး၊ လှဲလျောင်းနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေကို တယောက်ခြင်းကြည့်၊ သဘောအကျကြီးကျပြီး၊ ဟိုဘက်ထိပ်၊ ဒီဘက်ထိပ် လမ်းလျှောက်လေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်၊ သူသဘောမကျတဲ့ အရာတခုကို ရှိတယ်။ အမေရိကန်တချို့ ကျောက်ဆောင်ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး ငါးမြှားနေတဲ့ မြင်ကွင်းကို ကြည့်ပြီး သူက ခေါင်းယမ်း၊ အပြစ်တင်ပြီး အားမလိုအားမရ ပြန်လာလေ့ရှိတယ်။ “ အကို- သိလား။ အမေရိကန်တွေက smart မဖြစ်ပါဘူးဗျာ”
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး (သို့) အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ဆုံးရှုံးနေသောအမွေ
ဓမ္မစေတီခေါင်း လောင်းကြီးမှာကမ္ဘာပေါ် တွင် အကြီးဆုံးသော ခေါင်းလောင်း တော်ကြီး ဖြစ်ပြီး ၁၄ ရာစုတွင် မွန်ဘုရင် ဓမ္မစေတီမင်းမှရွှေတိဂုံ ဘုရားသို့ သွန်း လုပ် လှူဒါန်း ခဲ့သည်။
၁၆ ရာစုတွင် ပေါ်တူဂီ လူမျိုး ဒီဗရစ်တို ခေါ် ငဇင်ကာမှ ခေါင်းလောင်းကြီးကို ရွှေ တိဂုံ ဘုရားကုန်းတော်ပေါ်မှ အဓမ္မ ယူငင် သွားပြီးနောက် ဖောင်ဖြင့် သယ်ယူရန် ကြိုးစားစဉ် ရန်ကုန်မြို့နှင့် သံလျှင်မြို့အကြား မြစ်သုံးခု ဆုံရာ နေရာတွင် နစ်မြုပ် သွားခဲ့သည်။
ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် မေးတင်တည်ရှိနေသည့် ဖူးခက်မြို့နိုင်ငံတစ်ကာလေဆိပ်၏ ထက်ဝဠာကောင်းကင်ယံတခိုတွင် မိုးသားတိမ်လိပ် တို့ ကင်းစင်၍ သာယာလှသော ရာသီဥတုဖြစ်လင့်ကစား အနောက်တိုင်းဝတ်စုံအပြည့်ဖြင့်၊သပ်ယပ်ခန့်ငြားစွာ၊ လေဆိပ်အထူးဧည့်ကြို ခန်းမတွင်းသို့ရောက်ရှိနေသော ဆြာဒင်အဖို့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ပုရွက်ဆိတ်တက်သလို ရွစိရွစိခံစားနေရ၏။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကို ကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၈ဝ ရလိုမှုဖြင့် တရားစွဲမည်
မြန်မာ့ဆက်သွယ် ရေးလုပ်ငန်းအား အမေရိကန်နှင့် အိန္ဒိယ နည်းပညာကုမ္ပဏီနှစ်ခုတို့ ပူးပေါင်းလုပ် ကိုင်သည့် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ I.I(W.S)မှ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၈ဝ ရလိုမှုဖြင့် တရားစွဲဆို မည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ
I.I(W.S)မှ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာမြတ်နုခိုင်က ပြောသည်။
မော်လမြိုင် - ဘားအံကားလမ်း ကားတိုက်မှု ၃ ဦးသေ၊ ၁၇ ဦး ဒဏ်ရာရ ရုရှားစစ်ယာဉ်တန်း ယူကရိန်းနယ်စပ်ကို ထွက်ခွာ
Ferrari ပြိုင်ကားဟောင်းတစီးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၈.၁ သန်းနှင့် ရောင်းချ
အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအရေး ကုလမှာ ဆုံးဖြတ်
ပုဒ်မတစ်ခုထဲနဲ့ မြို့နယ်ခွဲအပြစ်ဒဏ်ပေးနေတာ ဥပဒေနဲ့မညီကြောင်း ကိုထင်ကျော်ရှေ့နေပြောကြား
အငှား ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာကို ထိုင်းတင်းကြပ်
မြေယာမူနဲ့ဥပဒေ တစ်ခု ပေါ်ပေါက်ရေး သဘောတူ
"လေးစားဖွယ်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်မဟာ" The Express Times
၀ူစလီကားနက်လေးမှ ယာဉ်မောင်းသည် လမ်းဆုံသို့ရောက်သော် ဘရိတ်ကို အသာမှေးပြီး အရှိန်ကိုလျှော့လိုက်သည်။ ထိုစဉ်မှာပင် လမ်းပြပုလိပ်သည် မောင်ဂိုမာရီ
လမ်းမကြီးမှ ကားများကို လွှတ်ပေးနေစဉ် စတော့ကိတ်လမ်းဘက်မှ ၀ူစလီကားနက်လေးကို ဖြုန်းခနဲ မြင်လိုက်သည့်အခါ ပြာပြာ သလဲဖြစ်သွားပြီး လမ်းမကြီးမှ ကားများကို ခရာတွတ်၍ ရပ်တန့်လိုက်သည်။